Indlu yaseLake Wind Beach - I-Airbnb
Indlu yaseLake Wind Beach
Le renti ikhethekileyo ikwibhlokhi enye ukusuka kweyona ilungileyo iGrand Marais inokunikezela. I-rustic yezothando kodwa inika lonke uncedo lwangoku kubandakanya nekhitshi elikhulu, siqinisekile ukuba uya kuziva usekhaya kule ndawo yaseNorthwoods.
Iindwendwe eziye zahlala apha zamkele into efumaneka kule ndlu. Ikhitshi elixhotyiswe ngoyena mpheki ubalaseleyo, indawo enkulu yomlilo ekhethekileyo, indawo ezininzi zokuhlala ezitofotofo, ezinye izinto zobugcisa ezikumgangatho ophezulu zonke zenza ithuba elonwabisayo nelokonwabisa. Ukuhamba ngebhloko e-1 ekulungeleyo ukuya elunxwemeni, i-bay, kunye nedolophu yonke into efunekayo ukonwabela amava edolophu encinci. Okanye zulazula kumhlaba omkhulu ongaphuhliswanga kunye nonxweme olucocekileyo lweLake Superior olujikeleze iGrand Marais.
I-HDTV ene-I-Fire TV, I-Netflix, I-Roku
4.99 · Izimvo eziyi-163
ILake Wind House ikwindawo "Yoluntu lwaseLwandle" inxalenye yeGrand Marais ekunxweme lweLake Superior. Ilokishi yaseMarina echwebeni ingaphaya kwesitalato kwaye ezantsi kwedolophu kumgama omfutshane onyuka induli ukuya emazantsi. Emva kwale propati kukho ipropati yelokishi. Idayimani yebhola, iziko loluntu, ibala lokudlala kunye nebala lenkampu zikhona. Le propathi inemvakalelo eqhelekileyo yokususwa kunye nokuba bucala nangona zininzi izinto zokwenza kumgama wokuhamba.
Sihlala sikuvuyela ukunceda. Xa kunokwenzeka sikhetha ukudibana nawe xa ufika ukuze uqhelane nendlu okanye uphendule imibuzo. Singabahlali unyaka wonke ukuze sifumaneke ngexesha elifanelekileyo.